Waa Maxay Wasaarad & Sida Loo Sameeyo Mid Soo Jiidanaya Macaamiisha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Waa maxay Minisite & sida loo abuuro mid si ay u soo jiitaan macaamiisha
Waa maxay Minisite & sida loo abuuro mid si ay u soo jiitaan macaamiisha
In kasta oo ay wanaagsan tahay in la helo shabakad dhammaystiran oo bixisa dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin dhageystayaasha bartilmaameedka ah, had iyo jeer maaha habka ugu fiican.
Mararka qaarkood waxa si fudud u roon in la yeesho bog si dhammaystiran u goonida ah oo u gaar ah mawduuc gaar ah, oo ah meesha wasaaradaha (ama microsites) soo gal.
Maqaalkan blog-ka ah, waxaanu ku dabooli doonaa waxa uu yahay minisite iyo sababaha kala duwan ee ay shirkaddu u tixgelin karto in ay haysato mid ka mid ah istaraatiijiyad suuqgeyneed oo weyn.
Intaa waxa dheer, waxaanu sidoo kale dul mari doonaa sababta ay tani uga duwan tahay bogga degitaanka iyo habka loo abuuro ololeyaal guul leh.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Aynu isla boodno.
Waa maxay Wasaaraddu?
Minisite-ku si fudud waa degel yar oo leh hal ilaa shan bog oo ka kooban.
Caadi ahaan, aad bay u yar tahay si aad isha ugu hayso:
Adeeg gaar ah.
Soo saarista alaabta.
Ama dhacdo kale oo hal mar ah.
Ka fakar ilbidhiqsi kan.
Marka noocyada waaweyn sida McDonald's ama Starbucks ay martigeliyaan tartan, badanaa waxay abuuraan degel gaar ah inta lagu jiro xilliga gelitaanka isreebreebka.
Marka ay arrintu dhammaato, waxay hoos u dhigaan mareegaha. Tani waa tusaalaha ugu muhiimsan ee goobta shaqada.
Intaa waxaa dheer, meelaha minisite-yada waxaa badanaa lagu dalacaa si ku meel gaar ah.
Inkastoo ay noqon karaan qaar ka mid ah ujeedooyinka taraafikada dabiiciga ah, inta badan maaha qayb ka mid ah istaraatiijiyada SEO ee muddada-dheer.
Taa baddalkeeda, waxay u adeegaan sabab aasaasi ah oo marka ay dhamaato, bogga lama cusbooneysiiyo ama waa laga saaray gebi ahaanba.
Minisite vs. Bogga Degista: waa maxay faraqa u dhexeeya?
Tani waa su'aal wanaagsan.
Dadka intooda badani waxay ku wareeraan minisite iyo bogga degitaanka, taas oo dhab ahaantii ay si muuqata uga duwan yihiin.
Bogagga soo degista guud ahaan waxaa lagu martigeliyay isla mareegta bogga ugu weyn ee shirkadda.
Iyo, halka ay sidoo kale kor u qaadaan alaabooyin ama dhacdooyin kala duwan, inta badan looma arko inay si buuxda uga duwan yihiin ganacsiga ama astaanta guud.
Taas bedelkeeda, microsites waxay leeyihiin magac domain u gaar ah.
Iyadoo laga yaabo inay isticmaalaan magaca ama astaanta astaanta guud, si buuxda uguma xidhna website-ka aasaasiga ah.
Waxay sidoo kale aad uga badan yihiin ku meel gaadh ahaan bogga degitaanka mana qabaan baahi dhab ah oo loogu talagalay taraafikada dabiiciga ah ee muddada-dheer.
Marka ay timaado abuurista minisite ujeedo gaar ah, waxaa jira faa'iidooyin badan oo geeddi-socodka.
Fursad lagu kala sooci karo dhacdo ama badeecad gaar ah
Waxaad tan u samayn doontaa si dhacdadaada ama alaabtaadu ay ugu sii sugnaato iftiinka.
Tusaalaha tani waxay noqon kartaa hantiilaha abuura microsite kaliya hal hanti oo heer sare ah si loo hubiyo inay hesho heerka saxda ah ee dareenka.
Wasaaraduhu waxay kuu oggolaanayaan inaad sameyso xoogaa tijaabo ah oo kala qaybsan si aad u aragto waxa ugu fiican.
Qaar ka mid ah suuqgeyneyaasha dhijitaalka ah waxay doortaan inay abuuraan laba, saddex, ama xitaa ka badan oo minisites ku wareegsan mawduuc isku mid ah oo leh meelo kala duwan oo badhanka, sawirro, iyo midabyo.
Kadibna waxay helayaan midka hela heerka jawaabta ugu sarreeya ka hor inta aan la xidhin kuwa hadhay.
Sare fudud oo degdeg ah in la abuuro
Qofka leh celceliska heerka celceliska khibradda WordPress wuxuu guud ahaan yeelan karaa minisite dhan oo lagu sameeyo saacado yar gudahood - taas oo si weyn uga duwan mashaariicda waaweyn ee qaata toddobaadyo, bilo, ama xitaa sannado si si buuxda loo dhiso.
Si fudud loo dhigo, faa'iidada ugu weyn ee isticmaalka microsite waa in ay xoogga saarto mawduuc gaar ah iyadoo waliba ay tahay mid fudud in la dhiso.
Sidee Loo Dhisayaa Wasaarad Guulaysata?
Dhisidda goob yar oo guul leh waa mid fudud ilaa iyo inta aad ogtahay tillaabooyinka saxda ah ee lagu samayn karo.
Halkan waxaa ah dhowr tilmaamood oo kaa caawinaya inaad bilowdo.
Talaabada Koowaad: Go'aanso Diirada Keliya
Talaabada ugu horeysa ee abuurista minisite kasta waa in la go'aamiyo diiradda kali ah.
Ma dhacdo gaar ah ama abaalmarin tartan?
Ma waxaad diiradda saaraysaa la shaqaynta nooc ka duwan ama soo saarista alaab?
Markaad tan soo koobto, waxaad u gudbi kartaa habka.
Tallaabada Labaad: Maskaxda oo Diiwangeli Magaca Domain
Marka xigta, maskaxdayso oo diwaangeli magac domain oo ku habboon diiraddaada microsite-ka ee gaarka ah.
Xitaa waxaad baadh kartaa bogga dhacay si aad u heshid mid si sax ah ula jaanqaadi kara fariintaada guud adigoo wali isku shaandhaynta taraafikada hore ee bogga.
Kaliya iska hubi inaadan soo galin arrin ku saabsan gefafka boggii hore marka hore.
Markaad iibsatay bogga, waxaad diyaar u tahay inaad sii waddo.
Tallaabada Saddexaad: Dooro Marti-geliyaha
Doorashada martigeliyaha waxay u ekaan kartaa mid aan caqli-gal ahayn, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in microsites ay leeyihiin baahiyo ka duwan kuwa mareegaha waaweyn.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn xirmada martigelinta ee ugu qaalisan halkaas ama qorshe shan sano ah.
Taa beddelkeeda, raac shay la awoodi karo, rar degdeg ah, oo bixisa dabacsanaan markaad diyaar u tahay inaad hoos u dhigto microsite-ka.
Haddii aad tan xiisaynayso, aan kuu soo jeedinno tababarka?
Talaabada Afraad: Samee Khariidad Maab ah
Caadiyan, habka dhisidda mareegaha waxaa ku jira qaabeynta bogga ka dibna la ogaado waxa lagu dhejiyo.
Iyada oo microsite ah, tan waxaa loo sameeyaa si kale.
Waxa aad hore u garanaysay waxa aad doonayso in boggu ka hadlo, markaa si kooban u qor dulmar qaybaha kala duwan ee bogga wayn iyo waxa ay tahay in lagu daro saddex ilaa shan bog-hoosaadyo.
Tani waxay ku siin doontaa qorshe markaad gaadho marxaladda naqshadaynta.
Talaabada Shanaad: Nakhshad Mareegta
Tani waa meesha aad ka garanayso muuqaalka, farsamada, iyo khibradda isticmaale ee goobtaada yar.
Guud ahaan, waa inaad ka gudubtaa xidhiidh kasta oo toos ah oo ka dhexeeya bogga astaantaada aasaasiga ah iyo ku daristan cusub ee yar yar, maadaama ay jahawareerin karto suuqa aad beegsanayso.
Hubi in boggu fudud yahay in la dhex maro, oo uu si fiican uga muuqdo dhammaan cabbirrada shaashadda, oo si degdeg ah loo raraynayo.
Ma u baahan tahay hab degdeg ah oo aad wax ku dhisto? ra'iyi waa doorasho weyn oo loogu talagalay abuurista microsites isdhexgalka muddo gaaban gudaheed.
Talaabada Lixaad: Ku Qor Copy Website
Qoritaanka koobiga mareegta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka wasaaradda oo dhan.
Ka dib oo dhan, waxa kaliya oo aad haysataa boos kooban oo aad ku gudbiso fikradaada oo aad ku sheegto waxaad rabto inaad sheegto.
Haddii ay caawiso, samee a Qofka iibsada xaashida sharraxaysa cidda aad isku dayayso inaad beegsato iyo nooca farriimaha ee iyaga ugu wanagsan.
Talaabada toddobaad: Bilaw Minisite & Drive Traffic
Hadda waa waqtigii hawsha aad si dhab ah u bilaabi lahayd microsite-kaaga.
Tani waa heshiis weyn, sababtoo ah waxay la macno tahay fikraddaadu waxay si buuxda u soo gashay adduunka.
Maadaama aadan aad diirada u saari doonin hagaajinta raadintaIsku day inaad u dirto taraafikada xayaysiisyada lacag bixinta, suuq-geynta warbaahinta bulshada, qaraxyada iimaylka ee liiska ugu muhiimsan ee astaantaada, ama wax kasta oo kale oo kooxda suuqgeyntu ay la timaado.
Qaar ka mid ah noocyada waaweyn ayaa xitaa iibsada boodhadhka xayeysiiska, wakhtiga ganacsiga ee telefishinka, iyo in ka badan si ay kor ugu qaadaan macaamiisha.
Tallaabada Sideedaad: Sug Muddada
Qaybtani waa mid aad u xiiso yar, laakiin sugitaanka muddada ololaha waa muhiim.
Dhamaadka dhamaadka, diiradda ugu weyn ee microsite-kaaga ayaa iman doona oo tagi doona.
Waxaa laga yaabaa in dhacdadaas aad dareenka u soo jeedinaysay ay dhammaatay ama waxaad siisay shayga isreeb-reebka dhawr guul-guulaystayaal nasiib leh.
Waxaa laga yaabaa in alaabtii aad riixaysay ay wakhti dheer tagtay ama xamaasadii ay dhammaatay.
Wax kasta oo aad sugayso inay dhacaan, ha dhacaan.
Talaabada Sagaalaad: Soo deji
Ugu dambeyntii, waxaad u baahan doontaa inaad hoos u dhigto minisite-kaaga waqti dheer ka dib.
Ku-ilaalinta kaliya waxay la tartantaa taraafikada mareegtaada summadaada ugu weyn, kaas oo noqon kara xoogaa xanuun ah marka la eego suuq-geynta muddada-dheer.
Haddii dhacdadaadu tahay mid sanadle ah, waxaa laga yaabaa inaad runtii tixgeliso inaad ka tagto microsite-ka, laakiin ku darida ereyada sheegaya in macaamiishu ay qorsheynayaan inay yimaadaan sanadka soo socda.
Fiiro gaar ah: adoo tilmaamaya magacyo domain oo gaar ah mareegahaaga ugu muhiimsan
Sida ereyga digniinta ah ee dheeraadka ah, waxaa muhiim ah in la ogaado in dhisidda microsite kaliya si loo tilmaamo magaca domain boggaaga dambe ma aha fikrad wanaagsan.
Google ma aha taageere, taas oo macnaheedu yahay in aad dhaawacayso fursadahaaga dabiiciga ah iyo darajaynta booska dambe haddii taasi tahay qorshahaaga.
In kasta oo ay caadi tahay in lagu xidho mareegahaaga ugu weyn, ha u tilmaamin barta microsite-ka bogga ugu weyn ka dib markaad la socoto bogga niche.
Ma rabno inaan ku siino hagaha kama dambaysta ah ee goobaha minisite-ka iyadoo aan ugu yaraan ku siinin dhawr tusaale oo muhiim ah.
Dhammaan kuwan waa bogag ku salaysan fikradda ah in minisite uu ka duwan yahay bogga ugu weyn ee astaanta, waxay bixisaa diiradda kali ah, waxaana hoos loo dhigi karaa wakhti kasta marka dhacdada ama soo-saarka alaabtu ay dhammaato.
Kalluunka Dahabka ah ayaa dhoola cadeynaya by Pepperridge Farms.
Nooca Hal-abuurkayga ee Adobe.
Dhibic kasta oo u dambaysa by Waterwise.
Ololaha Mustaqbalka Kalkaaliyaha ee Johnson & Johnson.
Sideed Ku Ogaatay In Wasaaradu Ku Saxantahay Ganacsigaaga?
Fahamka goorta iyo sida loo isticmaalo goobta yar ee ganacsigaaga waa muhiim.
Dhammaan noocyada runtii uma baahna mid si ay u abuuraan buuq sabab gaar ah, laakiin waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu hubinayo heerka saxda ah ee dareenka dhulka waxa aad diirada saarayso.
Haddii aad ka fekereyso inaad abuurto microsite, go'aanso haddii dhacdada ama badeecada ay aad uga fog tahay diiraddaada guud.
Kuwa si cadaalad ah ugu dhow waxa aad caadiyan samayso waa in lagu daayo boggaga ugu muhiimsan.
Sidoo kale, diiraddaada wasaaraddu waa inay noqotaa mid ku meel gaar ah, soconaysa dhawr toddobaad ilaa dhawr bilood.
Haddii ay tahay shay diiradda saaraya muddada dheer, ka dibna horay u sii wad oo kaliya uga tag boggaaga ugu muhiimsan ama dhis bogga internetka oo buuxa.
Hooska ilaa Wasaaradaha
Dabcan, waxaan u baahanahay inaan ugu yaraan taabno dhowr sababood oo laga yaabo inaadan u rabin inaad haysato meel yar oo sumaddaada ah.
Waa kuwan qaar yar oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso.
Kobaca taraafikada oo gaabis ah marka loo eego mareegta jirta
Waxaad u shaqeysay si adag si aad u dhisto dhagaystayaashaada mareegtaada jirta.
Bog cusub oo caan ah ayaa laga yaabaa inay ku qaadato waqti dheer si aad u hesho suuqa aad beegsaneyso ilaa aad samaynayso qaddar cadaalad ah oo dallacaad ah oo lacag ah.
Waqti iyo agab wax lagu dhiso
Microsite-yadu way yar yihiin, laakiin waxay weli ku qaataan waqti iyo kheyraad cadaalad ah kooxdaada si ay u dhamaystiraan.
Taasina waxay diiradda si ku meel gaar ah uga saari kartaa mareegahaaga ugu muhiimsan.
Ka qayb qaadashada dhagaystayaasha oo la qasi jiray
Haddii dhagaystayaashaada ugu muhiimsani ay tahay inay aadaan meel kale si ay ula falgalaan macluumaadkaaga, tani waxay ka dhigaysaa isdhexgalka ay ku sameynayaan mareegahaaga ugu weyn.
jahawareerka macaamiisha daacadda ah
Qaar ka mid ah macaamiisha daacadda u ah muddada-dheer ayaa laga yaabaa inaysan fahmin sababta ka dambeysa sababta aad u leedahay meel yar marka hore.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la caddeeyo in boggan yar uu diiradda saarayo dhacdo gaar ah ama badeecad, laakiin mareegahaaga ugu muhiimsan ayaa weli u ah astaantaada.
Halka kuwan oo dhan ay yihiin arrimo maskaxda ku soo dhaca marka la go'aaminayo haddii minisite uu yahay doorasho ku habboon Ujeedadaada qeexan awgeed, waxaa muhiim ah in aad xasuusato in haysashada iyaga ay macno samaynayso sababaha qaarkood marka loo eego kuwa kale.
Isku soo wada duuboo: Abuurista Wasaaradaha Suuqgeynta
Habka adag ee lagu soo jiito dareenka ujeedo gaar ah, dhacdo, ama badeecad waa in la abuuro meel yar.
Ma aha oo kaliya inay bixiso dabacsanaan dheeraad ah, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad tijaabiso fariimaha suuq-geynta gaarka ah si ka duwan mareegahaaga ugu weyn.
Intaa waxaa dheer, waxaad awood u leedahay inaad hoos u dhigto marka wax kasta oo aad xayeysiinayso la marayo.
Ma aha oo kaliya tani waa wax ay noocyada waaweyni si joogto ah u sameeyaan, laakiin sidoo kale waxay si fiican ula shaqeysaa codsiyada B2B iyo B2C labadaba.
Sida aan ku sheegnay qoraalkan, hal xeelad oo weyn ayaa ah in la isticmaalo walxaha is-dhexgalka iyada oo qayb ka ah goobtaada.
Markaa ka eeg ebook-kayaga oo leh talooyin fara badan bilaabista suuq-geynta is-dhexgalka!
Falanqaynta LinkedIn: Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeeyayaasha
BGMI waxaa loo bilaabay iOS, laga soo dejiyo App Store